Shiinaha Gawaarida khafiifka ah ee Hilin-soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Vishi
Tpye Laba Jilaa Laba-geesood laba-geesood ah oo labada geesood leh
Caajisey Φ32.Φ40.Φ50.Φ63.Φ80.Φ100. (Φ125) Φ32.Φ40.Φ50.Φ63.Φ80.Φ100. (Φ125)
Max.Warbixinta Shaqada l40kgf / cm2(13.729Mpa)
Allow Press 210kgf / cm2 (20.594Mpa)
Min.Warbixinta Shaqada 3 ~ 8kgf / cm2
Xadka Xawaaraha 8 ~ 100mm / seken
Shaqaynta Temp 10 ~ + 80 ℃
Codso Saliida Shaqada Saliida Macdanta ee Guud ahaan
Dulqaad dulqaad of Rod KSB0214 2 Fasal
Dulqaadka istaroogga 0 ~ + 0.8mm
Nooca Taageerida Nooca Aasaasiga ah
※ Adoo isticmaalaya Press over140kgf / cm2 Plseas Na Weydii
IsticmaalkaTemp 100, Fadlan Na Weydii
※ Isbeddelka ayaa Dalban Kara (Fadlan Na Weydii)
Nooca Beddelka. Cabbirka R Isbeddelka
Mashiinka hareeraha ee khafiifka ah ee khafiifka ah waxaa lagu qalabeeyaa gacan qabasho si fudud loo qaado. Waxaa badanaa loo isticmaalaa booska cidhiidhiga ah wuxuuna leeyahay awood hawlgal oo ku habboon meesha yar ee dhismaha laga dhisayo.Wuxuu ka yar yahay silsiladda caadiga ah ee korantada, waxaana laga shaqeyn karaa meel fog iyadoo la isku xirayo tuubbada cadaadiska sare leh ee khafiifka ah. Qaab dhismeedka kala go'ay ayaa aad ugu habboon dayactirka iyo dayactirka dusha sare ee Haydarooliga.
Tilmaamaha ku saabsan adeegsiga dhululubo aad u khafiif ah:
Ugu horreyntii, kahor intaan la isticmaalin waa in la hubiyaa in qaybaha silsiladda korontada ku shaqeeya ay caadi yihiin.
Marka labaad, xarunta culeyska culeyska si loo doorto dhexdhexaad, xulasho macquul ah oo ka mid ah dhibic xoog dhululubo ah, suufka sagxadda hoose, isla mar ahaantaana la tixgeliyo dhulka jilicsan iyo xaaladaha adag, haddii la suulinayo alwaax adag, si habsami leh loo dhigay, si iska ilaali miisaanka hoos u dhaca ama janjeera.
Ta saddexaad, markaad isticmaaleysid silsilad-khafiif ah oo khafiif ah, marka hore ku xir isku-darka degdegga ah ee mashiinka gacanta dusha sare, ka dibna xulo booska saxda ah, adke adoo ka soo baxa saliidda mashiinka saliidda, ka dibna way shaqeyn kartaa. hoos u dhig, ka dabci mashiinka mashiinka lagu riixo wax yar ka hor saacadaha isla markaana dhululubada waa laga dejinayaa. Markaas usha piston si tartiib tartiib ah ayey u dhici doontaa hadii kale waxay khatar noqon doontaa in dhaqso u dhaco.
Tan afraad, ka dib marka dhululubada korontada ku shaqeysa ay qaadi doonto culeys, culeyska waa in lagu taageeraa waqti ku habboon si adag, waa mamnuuc in la isticmaalo silsilad aad u khafiif ah oo hidde ah oo taageero ah.
Qodobka shanaad, isticmaalaha adeegsada dhululubada Haydarooliga waa inuu si adag ugu hogaansamo astaamaha ugu waaweyn ee qodobada, iskana ilaali culeys aad u sarreeya, haddii kale marka kor u qaadista dhererka ama qaadista culeyska ay ka sarreyso qodobbada, dusha sare ee dhululubada waxaa ku dhici doona saliid halis ah .
Tilmaamaha Amniga: Haddii isticmaaluhu u baahan yahay dhowr dhululubbooyin koronto lagu taagayo isla mar ahaantaana, marka lagu daro meelaynta saxda ah ee aaladaha hiddo-wadayaasha aadka u khafiifka ah, waa in la isticmaalaa filtarka shunt-ka badan-sare ah, isla markaana culeyska silsilad kasta oo hidda-shidaalka ah waa in la dheelitiraa , fiiro gaar ah u yeelo xawaaraha qaadista isku mid ahaansho.Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in lagu xisaabtamo suurtagalnimada in dhulku god ku dhici karo culeys aan dheellitirnayn darteed si looga hortago culeyska laga qaadayo inuu fooraro oo uu sababo khatar.
Piston ul oo leh dun duneed ah
Piston ul leh dun gudaha ah
Dhuuban dhuuban Haydarooliga YSB140H-LA50 2
Dhuuban dhuuban Haydarooliga YSB140H-LA50
Khafiif ah dhululubo Haydarooliga YSB140H-LA50 3
Hore: Dhululubada guud
Xiga: Taangiga saliida